1330nm 2mW 4mW Coaxial DFB Pigtail လေဆာ Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > 1330nm 2mW 4mW Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်
1330nm 2mW 4mW Coaxial DFB Pigtail laser diode သည် DFB ချစ်ပ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်၍ output power ကို 1 မှ4mw အတွင်းထိန်းချုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် CATV၊ digital နှင့် analog signal များအတွက်ဤ laser module ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
1330nm 2mW 4mW Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်၏ ၁။ အကျဉ်းချုပ်
1330nm 2mW 4mW Coaxial DFB Pigtail laser diode ၏နိဒါန်း
1330nm 2mW 4mW Coaxial DFB Pigtail laser diode ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
Coaxial pigtail အထုပ်;
Built-in InGaAs / PIN မော်နီတာ၊
operating အပူချိန်အကွာအဝေး: -20 မှ 80 '' ။
4. 1330nm 2mW 4mW Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုခြင်း
1330nm 2mW 4mW Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25âƒ) ။
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ PO = PF 1320 1330 1340 nm
၆။ ထုပ်ပိုးပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပါယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ၏ ၁၃၃၀nm 2mW 4mW Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်
၇။ ၁၃၃၀nm 2mW 4mW 4mW Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1330nm 2mW 4mW Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်၊